နတ်ကိုးကွယ်မှုနှင့် ငါးပါးသီလ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » နတ်ကိုးကွယ်မှုနှင့် ငါးပါးသီလ
Posted by Big Defender on Jul 30, 2011 in Buddhism, Critic | 16 comments
ကျွန်တော်တို့ ကမ္ဘာတွင်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ ကိုးကွယ်မူပေါင်းမြောက်မြားစွာ ရှိပါတယ်။ ထိုဘာသာထဲကမှ အဓိကအားဖြင့် ခရစ်ရှန် ၊အစ္စလန်၊ ဟိန္ဒူ နှင့် ဗုဒ္ဒဘာသာ ဟု (၄)မျိုးရှိပါတယ်။
ထိုဘာသာကြီး(၄) ဘာသာလုံး သူဟာနဲ့ သူကောင်းပါတယ်။ ဘာသာတိုင်း သူဆိုင်ရာ ကိုးကွယ် သူများကို ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းရန်
အများအကျိုး ဆောင်ရွက်ရန် ၊ မတရားမှုကို မပြုရန် ၊ ဟူသော စည်းကမ်းချက်များဖြင့် လိုက်နာသော သူများ မည်သသည့်အကျိုးခံစားရမည်။
မလိုက်နာသူများအနေဖြင့် မည်သသည့် ဆိုးကျိုးကိုခံစားရမည်ဟု လူအများရဲ့ ကောင်းကျိုးကို ရှေ့ရုးပြီး သတ်မှတ်ချက်များ ရှိကြပါသသည်။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်ှဗုဒ္ဒ္ဒ္ဒ္ဒ္ဒ္ဒ္ဒ္ဒဘာသာ နိုင်ငံအဖြစ်ခံယူထားသဖြင့် အများစုမှာ ဗုဒ္ဒဘာသာများ ဖြစ်ကြပါတယ်။
ဗုဒ္ဒဘာသာ ကိုးကွယ်သူ အများစုအတွင်းမှာမှ မိရိုးဖလားနတ်ကိုးကွယ်သူများလည်းအတော်ပင်များကြပါတယ်။ ဒါဖြင့်ကိုးကွယ်ရာ
ဗုဒ္ဒဘာသာကြီး တစ်ရပ်လုံးရှိတာတောင် ဘာလို့နတ်ကိုးကွယ်ကြတာပါလိမ့်?
လူတစ်ယောက်၏ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုကို ခံထိုက်သူသည် မည်သည့် အရည်အချင်းနှင့်ပြည့်စုံထိုက်သနည်း?
လူတစ်ယောက်၏ကိုးကွယ်ယုံကြည်မူကို ခံထိုက်သူတစ်ယောက်သည် အနည်းဆုံး သီလ၊ သမာဓိ ၊ ပညာ တော့ ပြည့်စုံသင့်ပေသည်။
ဒါဟာ အနည်းဆုံးအဆင့်ကို ပြောတာပါ။ လူအများ၏ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မူကို ခံထိုက်သူ တစ်ယောက်သည် ထိုထက်မက ပိုပြီးပြည့်စုံရမှာ ဖြစ်ပါသည်။
သူတော်ကောင်း တစ်ယောက် ဖြစ်ရန် အနည်းဆုံးတော့ ငါးပါးသီလ တော့ လုံခြုံ သင့်ပေသည်။ ငါးပါးသီလ မှ မလုံခြုံလျှင် သူတော်ကောင်း
တစ်ယောက် အဖြစ် လုံးဝလက်ခံနိုင်မှာ မဟုတ်ပါ။ ငါးပါးသီလ မလုံခြုံလျှင် သင်ရော သူတော်ကောင်း တစ်ယောက် အဖြစ်လက်ခံနိုင်ပါသလား။
ကဲ……………ဒါဖြင့်ရင် အတွင်း(၃၇)မင်းအပြင် (၃၇)မင်း လုံးကော ငါးပါးသီလ လုံခြုံခဲ့ရဲ့လား၊ စောင့်ထိန်းခဲ့ရဲ့လား?
ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်ကိုးကွယ်နေတဲ့ ဗုဒ္ဒမြတ်စွာဘုရားဟာ ငါးပါးသီလကို လူတွေကိုတောင် စောင့်ထိန်းအပ်တဲ့ သီလ အဖြစ်သတ်
မှတ်ခဲ့ပါသည်။ ဒါဖြင့်အဆိုပါ နတ်တွေထဲမှာ အရက်သောက်တဲ့ နတ် မရှိဘူးလားခင်ဗျ။ ရှိလိုက်တာမှ တစ်ယောက်ထဲ ကိုယ်ဘာသာကိုယ် သောက်ယုံ
မကဘေးနားကလူကိုပါ ယှဉ်ပြိုင်ကာ သောက်လိုက်ခြင်းသည်ဟု စိန်ခေါ်သော နတ်က ရှိသေးတယ် ပြီးတော့ အင်မတန်မှ ယုတ်ညံ့တဲ့ကာမေသု မိစ္ဆာစာရ
ကံကိုရော မကျူးလွန်ဘူးလားဆိုတော့လည်း………ကျူးလွန်းရုံမက မရတဲ့အဆုံး ကျားနဲ့ကိုက်သတ်ခိုင်းတဲ့ အထိပင်စိတ်ဓါတ်အောက်တန်းကျခဲ့သေး
ထားတော့………..တစ်ပါးခြင်းစီရဲ့ အကြောင်းကို လိုက်ရေးပြလျှင် ပြီးတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။
သာမန်လူတစ်ယောက်ပင် စောင့်ထိန်းနိုင်သော သီလကိုပင် မစောင့်ထိမ်းနိုင်လျှင် ကျွန်တော်တို့က သူတို့ကိုဘာယုံကြည်ရမည်နည်း။
ကျွန်တော် ရေးထားတာလေးတွေကို ပြန်ပြီင်္း
Big Defender…. အသင်လိုလူစား ……. တစ်သန်းပြည့်လျှင် အမိနိုင်ငံတော်ကြီး ယနေ့နှင့်မတူ တမူထူးခြား တိုးတက်လေအံ့…။ သြော်… ကောင်းလှောင့်တေး…….. ကောင်းလှောင့်တေး…….. ကောင်းလှောင့်တေး……..( ကောင်းလှောင့်တေး…….. ဆိုတာ ပုဂံ ခေတ်က ကောင်းလေစွလို့ ပြောတာနော် တစ်လွဲမထင်လိုက်နဲ့ဦး)
ဘာသာရေး-တလွဲမြင်-တိမ်သလ္လာတွေ မဖုံးပဲနေတဲ့သူ… ၁သန်းမဟုတ်ပါဘူး..
၁သိန်းဆိုရင်တောင် .. အဖမြန်မာပြည် တော်တော်ကိုတိုးတက်သွားမှာပါ..။
“ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်ှဗုဒ္ဒ္ဒ္ဒ္ဒ္ဒ္ဒ္ဒ္ဒဘာသာ နိုင်ငံအဖြစ်ခံယူထားသဖြင့် အများစုမှာ ဗုဒ္ဒဘာသာများ ဖြစ်ကြပါတယ်။”
စာထဲက.. အဲဒါ(အပေါ်ကအချက်အလက်)ကတော့ မှားနေ(မပြည်စုံဖြစ်နေ)ပါတယ်..။
– မြန်မာနိုင်ငံဟာ.. ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံအဖြစ် ခံယူထားခြင်း..ကြေငြာထားခြင်းမရှိပါ..။
– အများစုမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေလို့ တိုက်ရိုက်ပြောလို့မဖြစ်ပါ။ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေသာ ဖြစ်ပါတယ်..။
ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုဟာ.. မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ပါတယ်..။ (တရုတ်၊ ကိုရီးယား၊ ထိုင်ဝမ်၊ ဂျပန်)
1. မိမိစာနှင့် အနီးစပ်ဆုံးCategory (တခု)ကိုရွေးချယ်၍ပို့စ်တင်ပါ။ Tagထည့်ပါ။ Tagကို စာတလုံးစီကော်မာခံပြီးမှထည့်ပါ
…ဗုဒ္ဒဘာသာကြီး တစ်ရပ်လုံးရှိတာတောင် ဘာလို့နတ်ကိုးကွယ်ကြတာပါလိမ့်…..
လေးနက်တဲ့ဗုဒရဲ့တရားတော်တွေကို လေးနက်စွာမလေ့လာတဲ့ ဗုဒတရားတော်ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးနဲ့ အနှစ်သာရတွေကို မှန်ကန်စွာ မသိရှိတဲ့ အမည်ခံ ဗုဒဘာသာဝင်ဖြစ်နေကြလို့ပါပဲ။
ဘုရားရှိပါရဲ့နဲ့ နတ်ကိုးကွယ်တာ အချောင်ကြိုက်လို့ပေါ့ဗျာ။
ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရားကတော့ ကိုယ်လုပ်မှကိုယ်ရမယ်။
ကိုယ့်ဟာကိုယ်လုပ်ကြည့်လို့ အတိအကျ ပြောခဲ့ ရှင်းနေအောင်ပြောထားခဲ့ပါတယ်။
ဂေါတမမြတ်စွာဘုရား ဟောထားခဲ့တဲ့တရားတွေကို ကျင့်သုံးဘို့အတွက်က
လူမျိုးမလို အတန်းအစားမလို ဘာသာဝင်ဘို့မလို ဘယ်သူမဆို နှစ်သက်ရင် လုပ်ကြည့်လို့ရတယ်။
လူတိုင်းလူတိုင်းအတွက် ဖွင့်ပေးထားခဲ့တဲ့ တရားပါ။
နောက်လူတွေထပ်ကွန့်လို့ အခုလို အလွဲတွေဖြစ်ကုန်တာပါ။
နှစ်တွေ ကြာတော့ ဘယ်လောက် ခိုင်တဲ့ ကျောက်တိုင်ဖြစ်ဖြစ် ယိုင်နဲ့သွားသေးတာပဲ.. မပြိုလဲ သေးပဲ ယခု ဘ၀ လူဖြစ်ပြီး သိရတာကိုပဲ ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။
နတ်ကိုးကွယ်တာ နတ်“မ” မလားလို့ပေ့ါ
ဒါ့ကြောင့် “လူမစွမ်း နတ်မ”ဆိုတဲ့စကားတောင် ပေါ်လာသေးတာပဲ
ချက်ချင်းလောလောလတ်လတ်ဆိုရင် နတ်“မ”မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီး နတ်ကိုးကွယ်ကြတာပေ့ါ
ကံ၊ ကံ၏အကျိုးက နောက်မှ၊ ကြာဦးမှာဆိုတော့လည်း…….
နတ်ကိုးကွယ်တာ ယုံကြည်တဲ့ လူကျတော့လဲ အသေအလဲပဲ
ဘယ်လိုပြောပြောမရဘူး ကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ပြီဆိုရင် အောင်မြင်လဲ နတ်မတာ
မအောင်မြင်တော့လဲ နတ်မကြိုက်တာ လုပ်မိတာနဲ့ ရိုးမယ်ဖွဲ့နေကြ ။
ကိုယ်တွေကတော့ မယုံကြည်တာလဲ မဟုတ် ယုံကြည်တယ်လဲ ပြောလို့မရတော့
ဘာမှကို မကိုးကွယ်ဘူး ဂေါတမမြတ်စွာဘုရား ကလွဲလို့ ကျန်တာတွေ မကိုးကွယ်ဖြစ်ဘူး
လို့ ပြောရင်ပိုမှန်မယ် ….
အခုလူတွေက ရှေးလူကြီးတွေရဲ့ အယူမှားတွေကို လိုက်ယုံကြတာ.. ၃၇မင်းနတ်ဆိုတာက အမှတ်တော့ နတ်မဟုတ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်..ပရလောကသားပဲ ဒါပေမယ်သူတို့က ကမ္မစိတ်ဌိ တန်ခိုးရှိကြတော့ သူတို့ကို နတ်ဆိုပြီးတော့အရင်ကလူတွေကိုးကွယ်တာပါ ဒါကိုအခုလူတွေက ကိုးကွယ်ကြတော့ ဒိဌိတွေ ဖြစ်ကုန်ကြကော ကျွန်တော့အထင်တော့ ဒီနတ်တွေက အခုမရှိလောက်တော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ် အခုနတ်ဝင်လို့ .. နတ်တိုက်လို့ ဘာတို့ လို့ကြားတာတွေက နာနာဘာဝ တွေရောနေတာပါအမှန်တကယ် နတ်စိမ်းတွေက အခုလောက်ထိတော့ သူတို့မရှိတော့ပါဘူး.. ငရဲရောက်သွားတာ ကြာပါပြီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ ဖြူးဆရာတော်တို့ ဒယ်အိုးဘုန်းကြီးတို့ ဟောတာတွေက အမှန်တွေပါနတ်မကိုးကွယ်ရင် နတ်ကိုင်မယ်..တို့ဘာတို့ဆိုတာ လူတို့ကဖြစ်နေတာပါ လူသားအားလုံးရဲ့ကိုးကွယ်ရာကတော့ ဘုရား..တရား..သံဃာ ဆိုတဲ့ရတနာမြတ်သုံးပါးလို့ပဲထင်မိပါတယ်.. တခြားဘာသာရေးကိုတော့ ပုတ်ခတ်ပြောဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး..သို့သော် ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှု အမှန်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်..
နတ်စိမ်းတွေက အခုလောက်ထိတော့ သူတို့မရှိတော့ပါဘူး.. ငရဲရောက်သွားတာ ကြာပါပြီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ ဖြူးဆရာတော်တို့ ဒယ်အိုးဘုန်းကြီးတို့ ဟောတာတွေက အမှန်တွေပါနတ်မကိုးကွယ်ရင် နတ်ကိုင်မယ်..တို့ဘာတို့ဆိုတာ လူတို့ကဖြစ်နေတာပါ လူသားအားလုံးရဲ့ကိုးကွယ်ရာကတော့ ဘုရား..တရား..သံဃာ ဆိုတဲ့ရတနာမြတ်သုံးပါးလို့ပဲထင်မိပါတယ်.. တခြားဘာသာရေးကိုတော့ ပုတ်ခတ်ပြောဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး..သို့သော် ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှု အမှန်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်..
နတ်ထဲမှာတော့ ပီးနတ်(peanut) ဘဲ ကြိုက်တယ်
ကိုကိုးနတ် (coconut) တော့ သွေးတိုးစာမို့လို့ ရှောင်တယ်…ဟဲဟဲ။
khin chaw su says:
နတ်ကိုးကွယ်မှုနှင့် ငါးပါးသီလ ကို ဖတ် ရ လို့အား လုံး ကို ကျေး ဇူး ပါ ၊ တ ရုတ် နှစ် ကူး မှာ နာ နာ ဘာ ၀ တွေ ကို ဖိတ် ကျွေး တဲ့အ ကြောင်း အ ရင်း သိ သူ များ ရှိ ရင် ပြော ပြ ပေး ကြ ပါ နော်၊ ယ နေ့အ ထိ ရင် ထဲ မ ရှင်း လို့ပါ၊
အင်း ကျွန်မကတော့ ဘုရားကိုယ်တိုင်ကြိုက်နှစ်လိုခြင်းကင်းသောနတ်အပေါင်းကိုကိုးကွယ်စရာမလိုပါဘူး။ဘုရားရှိနေမှတော့ နတ်က ဘာလုပ်ဖို့ လိုအပ်ဦးမှာလဲ။လူဟာ နတ်တွေထက်မြတ်ပါတယ်နော်
ထေရ၀ါရဗုဒ္ဓ ဘာသာလို့ လက်ခံထားပြီး အဲဒီ ၃၇ မင်းဆိုတဲ့လူတွေကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်ပါ၏ ။ ဆိုပြီး ပြောဆိုရှိခိုးတဲ့လူမှန်သမျှ ဟာ ။ ဒိဌိ ဖြစ်ပါတယ်လို့ ဆရာတော်တွေရေးထားတာဖတ်ဖူးပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ အဲဒီ ၃၇ မင်းနတ်ဆိုတာတွေက ပြိတ္တာတွေဖြစ်နေလို့ပါပဲတဲ့။ အဲဒီလိုလူတွေဟာ ၀ိပဿနာ တရားထူးလည်း မရတတ်ပါဘူး။ သူတို့ကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခြင်းအားဖြင့် ငရဲတံခါးလည်းပွင့်နေပါတယ်။ နောက်သူတို့ကို မကိုးကွယ်ရင် အမျှအတန်းတော့ ပေးဝေလို့ရပါတယ်။
အယူတိမ်း..နတ်စိမ်းတွေ..သူတို့ကိုကိုးကွယ်မှုတွေကို… ပယ်ပယ်နယ်နယ်.. ဆော်ထားတဲ့.. လင်္ကာတပုဒ်ကို.. ရှေးဘုရင်တွေခေတ်က.. ဆရာတော်ကြီးတပါးရေးဖူးတယ်..။ ရတုတွေစပ်တဲ့.. ရှင်မဟာရဌသာရလို.. ဆရာတော်ကြီးပဲ..။
အဲဒါ.. သိသူတွေ ပြန်ရှာတင်ပေးပါဦး…။
နတ်ဆိုလို့ကတော့ ဘယ်နတ်မှ မကိုးကွယ်ဘူး … ။ ဒါပေမဲ့အနက်ရောင်တော့ ကြိုက်တယ် … (ဘာမှလည်း မဆိုင်ဘူးနော် အဟီး )